Ruux Al Shabaab usoo iibinjiray hubka oo la xukumay. – Kismaayo24 News Agency
by admin 8th May 2019 022
Maxkamadda Darajada Koowaad ee Ciidamada Qalabka Sida ayaa xukun xabsi ah ku riday Cadow Cabdulle Axmed (Carab) oo lagu helay dambi ah in uu hubka iyo saanada kale ee ciidanka u iibin jiray Ururka Al Shabaab.
Ciidamada amaanka ayaa gacanta kusoo dhigay Cadow Cabdulle oo ka shaqeyn jiray suuq madow oo hubka lagu iibiyo, waxa ayna ciidanka ninkan ku wareejiyeen xafiiska xeer ilaalinta ciidanka qalabka sida.
Xafiiska Xeer Ilaalinta Maxkamada ciidamada oo kaa shanayay Hey’adaha baarista ayaa fadhiga Maxkamadda kusoo bandhigay Eedeysanahan Cadow, waxa ayna Maxkamadda wax ka weydiisayin uu Al shabaab u qaabilsanaa iibinta hubka iyo saanadaha kale .
Ninkan ayaa Maxkamada ka hor qirtay in uu u furnaa suuq madow uu hubka ku iibiyo uuna marar badan hub iyo rasaas badan u iibiyay Al Shabaab uguna geeyay deegaano ay kamid yihiin Kuunya Barrow, Toorotoorow iyo Mubaarag .
Guddoomiyaha Maxkamadda Darajada Koowaad Ee Ciidamada Qalabka Sida Gaashaanle Sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa shaaciyay in Cadow Cabdulle Axmed (Carab) Maxkamada ku xukuntay sadex sano oo xabsi ah, waxa uuna cadeeyay in Xukunsanaha uu racfaan ka qaadan karo xukunkan hadii uusan ku qanacsaneyn.
Shirka Garoowe oo la iskumari waayey Qodob quseeya.
SAWIRO: Sheekh Shaakir oo soo Afjaray Colaadii kataagneed deegaanka.
gurey 7th February 2018
Sawirro: Soomaali geystay dil iyo kufsi, sheegtayna inuusan Muslim ahayn oo la maxkamadaynayo (Warbixin).
admin 19th January 2017
SAWIRO:Madaxweyne Ku-Xigeenka Puntland Oo Garay Magaalada Boosaaso